China Liquid Oxygen uye Nitrogen Kugadzirwa Kwekudyara / Liquid Oxygen jenareta vagadziri uye vanotengesa | KANA
Liquid Oxygen uye Nitrogen Production Kudyara / Liquid Oxygen jenareta
Isu tinozivikanwa nekuda kwedu kwakanakisa kweinjiniya hunyanzvi hwekugadzira emvura okisijeni zvinomera izvo zvinovakirwa pane cryogenic distillation tekinoroji. Kugadzira kwedu kwakaringana kunoita kuti edu masisitimu egasi akavimbika uye ashande zvakanaka zvichikonzera kuderera kwekushandisa mitengo. Kugadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu uye zvinoriumba, yedu yemvura okisijeni miti inogara kwenguva refu kwazvo inoda kushoma kugadziriswa. Nekuteerera kwedu nematanho akasimba ekudzora mhando, takapihwa zviyeuchidzo zvinozivikanwa senge ISO 9001, ISO13485 uye CE.
1.Air Kuparadzanisa Yuniti neyakajairwa tembiricha mamorekuru sieve kucheneswa, booster-turbo expander, yakaderera-kumanikidza kugadziriswa ikholamu, uye argon yekudzora system zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
2.According kune chigadzirwa chinodiwa, zvekunze compression, zvemukati compression (mhepo wedzera, senitrogen wedzera), kuzvidzora- kumanikidza uye mamwe maitiro anogona kupihwa.
3.Blocking chimiro dhizaini yeASU, nekukurumidza kumisikidza pane saiti.
4.Extra yakaderera kumanikidza maitiro eASU ayo anoderedza mweya compressor pedza kumanikidza uye mashandiro emutengo.
5.Advanced argon yekubvisa maitiro uye yakakwira argon yekuwedzera chiyero.
Mhepo Compressor: Mhepo inomanikidzwa pakadzika yakamanikidza ye5-7 bar (0.5-0.7mpa). Izvo zvinoitwa nekushandisa ichangoburwa compressors (Screw / Centrifugal Type).
Pre Kutonhora Sisitimu: Chikamu chechipiri cheichi chiitiko chinosanganisira kushandiswa kwefriji yekutanga-kutonhodza mweya wakagadziridzwa kutembiricha yakatenderedza 12 deg C isati yapinda munatsa.
Kunatswa kweMweya NeKunatsa: Mhepo inopinda yekunatsa, iyo inoumbwa nemapatya mamorekuru Sieve zvinomisa zvinoshanda neimwe nzira. Iyo Molecular Sieve inoparadzanisa iyo kabhoni dhayokisaidhi uye hunyoro kubva muitiro mweya usati mhepo wasvika pamhepo yekuparadzanisa Chikamu.
Cryogenic Kuchenesa kweMweya Nekuwedzera: Mhepo inofanira kutonhodzwa kusvika pazasi tembiricha yekunyorovera. Iyo cryogenic firiji uye kutonhorera zvinopihwa neyakanyanya kushanda turbo expander, iyo inotonhodza mweya kutembiricha pazasi -165 kusvika-170 deg C.
Kuparadzaniswa kweLiquid Mhepo kupinda muOxygen neNitrogen neMhepo Kuparadzanisa Column: Mhepo inopinda yakaderera kumanikidza ndiro yekupedzisira mhando kupisa kupisa humisi husina hunyoro, oiri yemahara uye kabhoni dhayokisa pasina. Iyo inotonhorera mukati meiyo inopisa exchanger pazasi pezasi tembiricha tembiricha nemhepo yekuwedzera maitiro mune yekuwedzera. Zvinotarisirwa kuti isu tinowana mutsauko delta yakadzika se2 degree Celsius kumagumo ekudziya evashandisi. Mhepo inonwiwa kana yasvika pamhepo yekuparadzanisa chikamu uye inopatsanurwa kuita okisijeni uye nitrogen nenzira yekugadzirisa.
Liquid Oxygen Inochengeterwa MuLiquid Kuchengetedza Tangi: Liquid okisijeni inozadzwa mune yemvura yekuchengetera tangi iyo yakabatana neiyo liquefier inogadzira otomatiki system. Pombi yepombi inoshandiswa kutora mvura yemhepo kubva mutangi.
Pashure: Cryogenic mhando mini chiyero chemweya kupatsanura chirimwa maindasitiri okisijeni jenareta nitrogen jenareta argon jenareta
Zvadaro: Liquid Nitrogen chirimwa Liquid Nitrogen Gasi chirimwa, Kwakachena Nitrogen Kudyara neMatangi
Liquid Oxygen Midziyo
Onsite senitrogen kurongedza muchina wezvokudya maf ...
Zvigadzirwa Zvakanakira Isu tinogadzira okisijeni yekudyara yesirinda yekuzadza nezvakanakisa zvinhu uye zvikamu Isu tinogadzirisa zvirimwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye mamiriro emuno. Isu tinomira mumusika wegasi maindasitiri isu tinopa yakanakisa mubatanidzwa wemutengo uye kugona kwedu masisitimu. Kuve zvizere michina, zvirimwa zvinogona kumhanya zvisina kuchengetwa uye zvinogona zvakare ...